Taariikh-nololeedkii Yuusuf Dirir Cabdi (1935 – 2015) – Somaliland Net
Home / History / Taariikh-nololeedkii Yuusuf Dirir Cabdi (1935 – 2015)
admin November 8, 2016	History
Mogadishu, Somalia claims many great men that try to fix the unfixable, trying to make sense of anarchy and violence, they try to normalized it but lost their lives in the process. Yusuf will be always be remembered among his freinds and family as gentleman and a brilliant sophisticated typical Somali man who loved and believed in the Unity of all Somalis. Yusuf Dirir Abdi a well educated Somalilanders was among the victims of Mogadishu city violence in a targeted assassination style killing in 2015. Rest in peace Yusuf Dirir Abdi Amiin Insha Allah, May Allah rest his soul and make him among the Jannah residents.
Yuusuf Dirir Cabdi: Xagal/Ceerigaabo 1935 – Muqdisho 2015
A Man of Peace. IHN Amiin.
Aabbihii waxbarashda casriga ah Maxamuud Axmed Cali (AHUN) ayaa hoosta xarriiqay oo yidhi sida aan looga-qaateenka afkiisa ka soo qaaday “kuma hawshoonno ardayda aannu Maddarasada Sheekh Dalmar ka soo qaadanno!” Sheekh Dalmar Axmed Maxamuud AHUN waxa uu ku geeriyooday Hindiya June 1991. Waxa Sheekh Dalmar na laga hayaa in uu yidhi “ragga aan wax baray laba nin baan hamadooda la yaabaa: waa Yuusuf Dirir Cabdi iyo Maxamed Saalax Cismaan!” Labadooda ba AHUN.
Jaamacadda waxa loo soo wada diray 1958 oo ay UK wax ka wada barteen Axmed Siilaanyo iyo Sulaymaan Maxamoud Aadan. Qaalib Muuse iyo Maxamuud Axmed na waxa loo diray American University in Beirut, Lebanon. Cali Khaliif na USA. Yuusuf Dirir Cabdi waxa uu ka bartay jaamacadda Reading culuunta dhaqaalaha.
Markii uu waddanka ku laabtay oo xornimadii na la qaatay, lana mideeyey Soomaalidii Ingiriiska iyo Talyaaniga, waxa uu qunsulnimo ka bilaabay safaaradddii Soomaalida ee Addis Ababa. Waxa kale oo ka shaqeeyey Ururka Midowga Afrika (OAU).
Horraantii 1970-aadkii waxa Muqdisho isugu yimi madaxda Afrika. Yuusuf Dirir oo hab-maamuuska qaabbilsanaa waxa uu madaxweynaha oo shirka guddoominayey uu diyaariyey qoraal ay ku cad yihiin wixii hab-raac maamuus iyo soo dhowayn ahaa ee aaay tahay inmadaxweynuhu raaco, maaddaama odaygu askari ahaa.
Wax yar ka dib, Yuusuf Dirir waxa loo taxaabay jeelka. Xabsigii Laanta Buur oo u dhaxeeyey Muqdisho iyo Afgooye ayaa Yuusuf lagu xidhay qol suke ah kelidii. Dhawr sannadood ayuu qoobad yar ku xidhnaa kelidii oo aanu cid la hadal, buug iyo jaraa’id uu akhiristana aan loo oggolayn, idaacad uu dhegaystana ha soo hadal qaadin.
Mar Yuusuf qolkaas uu xidhnaa wax laga waydiiyey xaaladdiisii, waxa uu ku jawaabay “adiga iyo maskaxdaada ayaa isku soo jeedsanaya oo hoos isu cunaya. Si aanan anigu isugu mashquulin waxa aan hawl ka dhigan jirey in aan maalin kasta toban jeer marna maydho, marna kalena hurhurgufo oo wadhwadho garamadayda, sharabaaddadayda, masarradayda, nuguustayda iwm!” Laanta Buur waxa ku xidhnaan jirey Cabdi Aadan (Qays), waana halkuu ku hal-abuuray gmaansadiisa Darmaan ee dameerka ku saabsan.
Yuusuf Dirir, waxa aan u lahaa aqoon baahsan oo ku dacal-dhebaysaa qofnimadiisa, dabeecadddiisa, dad-la-dhaqankiisa, mabaadidiisa, geddiisa iyo si’araggiisa.
Yuusuf Dirir Cabdi (AHUN) waxa aan ka bartay in iyada oo la gu kala duwan yahay afkaarta iyo mabaadida guud in haddana la wada noolaan karo nolol sharaf iyo milge dadnimo ka buuxaan leh oo is qadderin, is tixgelin, is maamuus, is waaceensi iyo is weheshi maan iyo muuq ba leh.
Muddadii aannu wada noolayn waxa aan u bartay in Yuusuf yahay siyaasi garaadkiisu u bisil yahay wax wada gorfaynta iyo naqdiga waxyaalaha lagu kal duwan yahay. Gu’ iyo garaad ba aabbe san ayuu iigu ahaa oo annaga oo kala saaran laba buurood oo iska soo horjeeda oo “kala acuudu billaysanaya” ayuu haddana suurta gelin jirey in aanay taasi saamayn taban ama xun ku yeelan wada xidhiidhkayaga iyo ehelnimadayada Alle nagu dhex beeray ee wax kasta oo kale ba ka horraysey, taas oo hanaqaadday oo keeni jirtay haddii aannu muddo kala maqnaanno in aannu isu soo jeelno oo xiisno annaga oo og in aannu afkaarta ku kala geddisannahay.
Waxa igu soo dhaci jirtey marka aannu Yuusuf doodayno qawlkii Cilmi Boodhari ee ahaa: “Waxa cayn ba cayn looga dhigay hays cajebiyeene!! Waxa aan ka bartay Yuusuf Dirir in kala duwanaanta aragtiyeed maskaxda ballaadhiso oo furfurto, wadaajisana dhacdooyin isku murugsan oo is wada diiddan kala jihayntooda ama isu is waafajintooda.
Yuusuf waxa uu ahaa nin hadal cad oo aan badheedhihiisa cidnaba kala gabban. Waxa uu ahaa nin hal-adayg maskaxdiisa ka buuxo oo aan laga leexin karin marihiisa iyo waddada uu raacayo.
“Dawada kulka cadceedda ku sugan iyo dhaqdhaqaaqa nool ka mid ahaantiisa ayaa ii jiidaysa oo Muqdisho oo aan la qabsaday oo aanan ka maarmayn igu wada iyo haddii aan halkan (UK) joogo oo aan ka baqayo in aan fadhiisto oo jidh iyo maskax caansiir iyo caas iga galaan, iyo meel kale oo aanan hadda qaban karin oo aanan lama jaanqaadi karin weeye qasdigaygu”, ayuu Yuusuf Dirir sheekadiisa iigu daray.
“Wax badan baa idinka (Somaliland ahaan) idinka xun ee wixiinna ku fara adayga oo hagaajista” ayaa sarbeebaha Yuusuf ka mid ahaa oo wuu iga hooseeyaaye run ah! In sahankii midnimo ee Soomaalidu ribbaday ayay arrintu daarrayd, weli se Yuusuf ma ahayn nin ka quustay midnimadaas, waayo mar walba waxa uu igu soo celcelin jirey “riyo haddii ay dib leeyihiin dabadooda ayay Maxamedow ku qarsan lahaayeen”. Qabyaaladda siyaasadaysan ayuu Yuusuf necbaa, ma aanu qarsan jirin oo waxa uu odhan jirey reerna dawlad ma dhisi karo, mana noqon karo qaran caddaalad iyo horumar lagu eerto sameeya.
It's a human thing to work to together to achieve a common Goal and objectives, Let us work together and we will succeed.	Previous Somaliland: Political Parties Prepare for the upcoming elections 2017
Next War Crimes committed against the people of Somaliland